वीपीलाई यसरी झुक्याएर पक्राउ गरेको थियो सेनाले, टुप्लुक्क सेना पुगेपछि यस्तो देखियो दृष्य ! « Surya Khabar
वीपीलाई यसरी झुक्याएर पक्राउ गरेको थियो सेनाले, टुप्लुक्क सेना पुगेपछि यस्तो देखियो दृष्य !
काठमाण्डौ । आज पुस १ गते । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो दिनलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रवादीहरुले कालो दिनका रुपमा लिने गर्दछन् भने राजतन्त्र र त्योसँग जोडिएका राष्ट्रवादीहरुले सुनौलो दिनको रुपमा लिने गर्दछन् । यसबेला पुस १ गतेलाई नेपालीहरुले कालो दिनका रुपमा मनाउने गर्दछन् । राजावादीहरुले भने तत्कालीन राजा महेन्द्रले चालेको कदम सुनौलो युग थालनी थियो भन्दै समीक्षा गर्ने गर्दछन्, तर पुस १ गते समय सापेक्ष राजनीतिक परिवर्तन चाहाने परिवर्तनका पक्षधरहरुले भने कालो दिनकै रुपमा लिने गर्छन् ।
२०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले वीपी कोइरालाको नेतृत्वको रहेको जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको थालनी गरेका थिए । राजा महेन्द्रले तत्कालीन सरकारले जनताको मनोभावना विपरित काम गरेको आरोप लगाउँदै सो कदम चालेका थिए ।
वि.सं.२००७ सालदेखि २०१५ सालसम्मको राजनीतिक संक्रमणबाट फाइदा उठाउँदै राजा महेन्द्रले आफ्नो हातमा शासनसत्ता लिन सफल भएका थिए । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रुपमा उदाएका वीपीले चाल्ने जनपक्षीय कदम र त्यसले राजतन्त्रमाथि हुने सम्भावित खतराको संकेत देखेर महेन्द्रले सो कदम चालेको जानकारहरु बताउँछन् । राजा महेन्द्रको सो कदमपछि मुलुकले ३० वर्ष पञ्चायतकालीन शासन व्यवस्थाबाट गुज्रनु परेको थियो ।
यसरी पक्राउ परेका थिए वीपी कोइराला
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गर्दै सँधैझै राजनीतिक गतिविधिमा व्यस्त भैरहने वीपी कोइराला २०१७ साल पुस १ गते पनि आफ्नै पार्टी निकट भातृसंगठनको एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी भैरहेका थिए । पार्टीको सो भातृसंगठनको त्यसैदिन पहिलोपटक महाधिवेशन हुँदै थियो । नेपाल तरुण दल नाम राखिएको सो संगठनको प्रथम महाधिवेशनको काठमाण्डौको थापाथलीमा उद्घाटन हुँदै थियो । नेता वीपी पनि सोही कार्यक्रममा उपस्थित थिए । प्रधानमन्त्री समेत रहेका वीपीलाई त्यसबेला ठूलो जनसमर्थन थियो । सोही कार्यक्रममा एक्कासि शाही नेपाली सेनाका कमाण्डरहरु देखापरे ।
दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त दलका प्रधानमन्त्री तरुण दलको कार्यक्रममा भाग लिइरहेका बेला दिउँसो साढे ११ बजे शाही सेनाका लेफ्टिनेन्ट जनरल सुरेन्द्रबहादुर शाह र ब्रिगेडियर जनरल समराज कुँवर नेतृत्वको टोलीले कार्यक्रमस्थलमै पुगेर ‘महाराजधिराजबाट तुरुन्त आउनू भन्ने बोलावट भएको छ’ भन्दै प्रधानमन्त्री वीपी कोइराला, गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय, निर्माणमन्त्री गणेशमान सिंह र सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सभास्थलबाटै लिएर गए ।
त्यसपछि सभामुख, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री सबैलाई ‘तपाईहरु हिरासतमा हुनुहन्छ’ भन्ने जानकारी गराइयो । केही मन्त्री र उपमन्त्रीहरु थापाथलीको सभास्थलबाटै भागे भने केही पक्राउ परे । उपप्रधानमन्त्री सूवर्णसमशेर उपचारको बाहनामा केही दिन अगावै भारतको कोलकाता गएका थिए । भरतसमसेर जबरा र बेनीबहादुर कार्कीले विदेश जान टिकट काटेका थिए, तर उनीहरु राजाको दर्शनका लागि दरबार जानेक्रममा दरबार अगाडिबाट समातिए ।
सभासम्मेलन गर्न नपाउने भनी गृहमन्त्रालयका नाममा विज्ञप्ति जारी भयो । राजदरबार अगाडिको सडकमा पुस १६ सम्म कफ्र्यू लगाइयो । नेताहरुको गिरफ्तारीलाई व्यापक बनाइयो । थापाथलीको कार्यक्रमबाट कसैले प्रतिरोध गर्ने साहास गरेनन् किनभने त्यसबेला राजाहरुको निरंकुशताको जगजगी थियो । वीपी र उनका मन्त्रीहरुलाई कब्जामा लिएर जाँदै गर्दा सबैले हेरेर बस्नुबाहेक केही उपाय भएन ।
यस्तो थियो राजा महेन्द्रले गरेको शाही सम्बोधन
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई पक्राउ गरिसकेपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले दिउँसो साढे ३ बजे नारायणहिटीबाट देशबासीका नाममा सम्बोधन गरे । उनको सम्बोधनमा भनिएको थियो:
ऐन कानूनको मर्यादा नराखी छिटो छरितो र योग्य बनाउने नाममा यो मन्त्रिमण्डलले देशको प्रशासनयन्त्र निश्त्रिmय र आधारहीन बनाउने चेष्टामा लाग्यो । अधिकार दुरुपयोग हुँदा भ्रष्टाचार बढ्नुको साथै अनेकानेक भ्रान्ति पैदा गराई प्रशासनयन्त्रमा पनि शिथिलता उत्पन्न भई देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न यो मन्त्रिमण्डल विल्कुल असमर्थ भएकोले र अराष्ट्रिय तत्वहरुले धेरै मात्रामा प्रोत्साहन पाई राष्ट्रिय एकतामासमेत बाधा पुर्या उने वातावरण आउन लागेको पनि कसैमा नछिपेको तथा वैत्रानिक विश्लेषण र वस्तुस्थितिको अध्ययनविना कोरा सिद्धान्तका आधारमा उठाइएको आर्थिक कमदहरुले समाजमा चाहिने परिवर्तनको सट्टा जनतामा अशान्त र दुषित वातावरण मात्र पैदा गरेकोले, राष्ट्रको हित तथा प्रजातन्त्रकै निमित्त पनि देशमा यस्तो स्थिति धेरै समयसम्म रहन दिनु उचित नभएकोले देशको एकता, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता बचाउने, देशमा अमनचैन कायम राख्ने र देशलाई कुनै कारणबाट पनि बिग्रँदो स्थितिबाट बचाउने अन्तिम जिम्मेवारी पनि हामीमै भएकोले, उपरोक्त वातावरण हटाई शान्ति सुरक्षा कामय राख्ने र देशलाई संक्रमण स्थितिबाट बचाउन विशेष व्यवस्थाको जरुरत पर्न आएकोले तथा देश र जनताको हितलाई मात्र ध्यानमा राखी संविधानको धारा ५५ को अधिकार प्रयोग गरी यो मन्त्रीमण्डल र संसद्का दुबै सदनहरुसमेत हामीबाट आज यो घोषणाद्वारा विघटन गरिबक्सेका छौं । कुनै नयाँ व्यवस्था गर्न केही समय लाग्ने हुँदा अर्को व्यवस्था नभएसम्म मुलुकको शासनभार हामीबाटै स्वयं ग्रहण गरिबक्सेका छौं ।
इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्छ
वीपीलाई तत्कालीन शाही सरकारले पक्राउ गरेको केही वर्षपछि छाडिए पनि मुलुकले भने ३० औं वर्षसम्म पञ्चायतकालीन व्यवस्थामा रहनुपरेको थियो । राजनीतिक संक्रमणमा थोरै पनि गडबडी हुँदा कस्तो स्थिति आइलाग्छ भन्ने कुरा अहिलेका राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरुले समेत बुझ्न जरुरी छ ।
मुलुकको पछिल्लो अवस्था पनि नयाँ संविधान जारी भएपछिको निकै संवेदनशील अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । संविधान कार्यान्वयन हुनै नदिने शक्तिहरु पर्दा पछाडिबाट खेल खेलिरहेका छन् । यो बेलामा पनि निकै सतर्क हुन जरुरी छ । इतिहासमै पहिलोपटक जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको रुपमा सरकारको नेतृत्वमा पुगेका वीपीको जस्तै हविगत अहिलेका राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरु भोग्न नपरोस् भन्ने कुरामा उनीहरु सचेत र इमान्दार हुन जरुरी छ ।
पछिल्ला दिन राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरुको रवैया देख्दा जनतामा निराशा छाउन थालेको छ । यसले मुलुकको राजनीतिक भविष्यको सुःखद संकेत गरेको देखिदैन । त्यसैले पुस १ गतेलाई कालो दिनका रुपमा मात्र मनाउने होइनकि त्यसबाट पाठ समेत सिक्न जरुरी छ, यो दिनबाट सबै पक्षले इतिहासको समीक्षा गर्दै प्रगतितर्फ लम्किन पाठ सिक्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।